आखिर कुकुरहरु किन एउटा खुट्टा उचालेर ठाडो वस्तुमा नै पिसाब फेर्छन? – Todays Nepal
आखिर कुकुरहरु किन एउटा खुट्टा उचालेर ठाडो वस्तुमा नै पिसाब फेर्छन?
हामीले अधिकांश समयमा कुकुरहरुले रुखको फेँदमा या त गाडीको टायरमा पिसाब फेरेको देख्छौँ । हाम्रो लागि यो निकै सामान्य कुरा हो । तर के तपाईले यसको कारण बारे जान्ने कोशिस गर्नु भएको छ? छैन भने आज हामीले तपाईलाई यसको विशेष कारण बारे बताउन गइरहेका छौँ ।
कुकुरलाई पिसाब फेर्ने जति नै धेरै ठाउँ दिए पनि उनीहरु रुख, गाडी, पर्खाल या त कुनै यस्तै ठाडो वस्तुमा पिसाब फेर्ने गरेको देखिन्छ । यसको पछाडी एउटा तार्किक कारण छ । वास्तवमा कुकुरहरु आआफ्नो इलाकामा बस्ने प्राणीहरु हुन् ।
उनीले यस्तो ठाउँमा पिसाव फेर्छन्, जो सधैँ ठाडो अवस्थामा रहेको हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा कुकुरहरु सधैँ आफ्नो नाकको उचाइमा पिसाब फेर्छन् । ताकि उनीहरु अन्य कुकुरहरुको लागि आफ्नो गन्ध छोड्न सकुन् । यसबाट उनीहरुले अन्य कुकुरलाई यो मेरो इलाका हो भनेर चिह्न छोड्ने गर्दछन् । यसैकारण नै कुकुरहरु सधैँ एउटा खुट्टा उचालेर रुख, गाडी, पर्खाल वा पिल्लरमा पिसाब फेर्छन ।
ससुरासँग बियर, पतिसँग हुक्का: संस्कारी बुहारीको यस्तो रुप !
‘विराटको अश्लील हर्कत’ भन्दै भाइरल भएको फोटोको यस्तो छ वास्तविकता